Ginglọ ọrụ na-ede blọgụ: Na-aza Mgbagha
Tuesday, June 15, 2010 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Douglas Karr
Inwe ezigbo nzukọ na ụlọ ọrụ nọ na Indianapolis bụ ndị na-arụ ọrụ iji hụ na onye ahịa ha siri ike ụlọ ọrụ ịde blọgụ atụmatụ. Ha amalitela mmalite ma anyị kwuru ọtụtụ ihe gbasara esemokwu na ịde blọgụ. Otu blog ha na-etinye na-atụle isiokwu nke nwere ike ịkatọ ndị nwere echiche megidere.
M na-ele ọtụtụ ụlọ ọrụ meghachi omume na-adịghị mma nnyocha site na-agbalị iji ezi uche na-agbachitere ma ọ bụ na-atụle ọnọdụ ha na emegide blog. Atụmatụ ọjọọ. Mgbe ị bịara na blọọgụ m iji chebe ọnọdụ gị, ị naghị arụrịta ụka m, ị ga - ahụ onwe gị ka ị na - arụrịta ụka banyere ndị agha nwere otu obi na - agụ blọgụ m mgbe niile.
Ọtụtụ mgbe, mgbe esemokwu malitere na blọọgụ m, m ga-edozi ya ma chere. Dịka, ndị na-agụ akwụkwọ ga-abịa enyemaka m ma dọwaa onye ahụ. Nke a bụ ihe na - eme ma a kpasuo gị iwe ịlụ ọgụ megide ngwongwo ndị otu na - emegide ya. Not na-anaghị arụrịta ụka na onye na - ede blọgụ - ị na - arụrịta ụka yana netwọkụ dị n’azụ blog ahụ. Ka ị na-arụ ụka, nlebara anya na-abawanye… mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-etolite, nyocha na-abawanye ma ịchọta ọkwa a na-emegide ya na nsonaazụ maka gị ụlọ ọrụ.
Na-ebute ọgụ n'ụlọ. Ọ bụrụ na onye na - ede blọgụ na - ede banyere gị ma ọ bụ azụmaahịa gị na - adịghị mma, jiri blog gị zaghachi. Kwesighi ịkọtụrụ ha… mana njikọ ga-esochi post ha ga-adọrọ uche ha ka ha wee hụ nzaghachi gị. Olileanya, ha ga-alaghachi na blọọgụ gị ma kwuo okwu. Ikekwe ha maara nke ọma! Ikwesiri ịma nke ọma.
Naanị ihe dị njọ karịa ụlọ ọrụ na-aza ozugbo na blọgụ ndị mmegide anaghị azaghachi ma ọlị. Na mgbasa ozi ohuru, enweghị nzaghachi dị ka hubris na enweghị ezigbo eziokwu. A na-eleghara blogger nke na-azaghị mmekpa ahụ na-ewuli elu anya dị ka nke adịgboroja… ha anọghị gburugburu ka ha wee nwee nghọta ma ọ bụ naanị ịkwalite onwe ha. Companylọ ọrụ ha na ụlọ ọrụ ha na-atụfu ntụkwasị obi na ọgụgụ.
Na-eweta ọgụ n'ụlọ mgbe niile!